लोयरको पाठ्यवर्ग भ्रमण गर्नुहोस् यात्रा समाचार
यदि तपाईं पेरिसमा केहि दिनको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईं जहिले पनि टूरको लागि साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ Loire को महल। कुनै पनि हालतमा तपाइँ सबैलाई थाहा छैन, तिनीहरू केहि थोरै हुन्, तर यदि तपाइँ आफैंमा लिप्त हुन चाहानुहुन्छ, भ्रमणहरू बिहान सबेरै छोड्छन् र राती 8 बजेतिर फर्किन्छन्। र यदि तपाइँ टुरहरू मन पराउनुहुन्न भने पनि, म तिमीलाई भन्छु, तिनीहरू यसको लागि लायक छन्।
महलहरू सुन्दर छन्, प्रत्येकको आ-आफ्नै इतिहास हुन्छ र यदि तपाईं मध्य युग, रेनेसान्स वा फ्रान्सको साधारणतया आकर्षण गर्नुहुन्छ जुन यी शताब्दी पुरानो भवनहरू हुँदै जान्छ, तपाईंले उनीहरूलाई चिन्नु पर्छ।
लोइर उपत्यका र यसका महलहरू
उपत्यका करिब २ 280० किलोमिटर कभर गर्दछ र फ्रान्सको केन्द्र तर्फ छ। बारेमा हुनेछ .800.। वर्ग किलोमिटर र यो हरियो क्षेत्र, दाखबारी, फल बगैंचा, धारा र ऐतिहासिक शहरहरूको हो। मूलतः उपत्यकामा त्यहाँ अझ धेरै महलहरू थिए तर आज करिब 300०० जति छन्। फ्रान्सेली क्रान्तिमा आगो, विनाश वा केवल समय र विस्मृतताले ती मध्ये धेरैलाई मेटाइसकेको छ।
व्यक्तिगत रूपमा, मलाई लाग्छ यस क्षेत्रलाई चिन्ने उत्तम तरिका भनेको कार भाँडामा लिनु हो र केहि दिनहरू यात्रा गर्नु र आफैंमा आनन्द लिनु हो। पर्यटकहरूसँग प्राय जसो प्रायः त्यहाँ बाहेक अरू कुनै कुरा हुँदैन एक यात्रा को लागी साइन अप गर्नुहोस्। जब मैले यो गरें, केहि वर्ष अघि मैले भर्खर १०० यूरो तिरेको थिएँ। हामी केवल सात व्यक्ति थियौं, चार स्पेनिश भाषा बोल्ने, एक इटालियन र एक अ ,्ग्रेजी, जो बिहान :100: .० मा एउटा मिनीवनमा घाटीतिर लागेका थिए।
मेरो केसमा हामीले आज महलहरू जान्यौं जुन म आज कुरा गर्ने छुः चेन्नोस, चेम्बर्ड र चेर्नी, तर पक्कै पनि त्यहाँ अरू धेरै छन् जो पाइपलाइनमा रहिरहेछन् र अत्यधिक सिफारिश गरिएको र लोकप्रिय छ।
El Chauteau de Chenonceau महिलाहरूको महलको रूपमा चिनिन्छ र मेरो लागि यो सब भन्दा सुन्दर र ती मध्ये एक हो जसले तपाईंलाई यटेरियरको जीवनमा ठूलो विसर्जन गर्न अनुमति दिन्छ। यो कसरी सुसज्जित छ को कारणले, तातो ... मूलतः यहाँ सानो किल्ला थियो जुन १ XNUMX औं शताब्दीमा पुनर्जागरण महलद्वारा प्रतिस्थापन गरिएको थियो जुन अहिलेको शताब्दीमा यसको वर्तमान आकारमा विस्तार भएको थियो।
यो महिलाको महलको रूपमा चिनिन्छ किनभने यो त्यहाँ बस्ने पहिलो महिला थिई क्याथरिन Briconnetकिनभने उनको श्रीमान्, निर्माणकर्ताले यो युद्धमा खर्च गरे। पछि उनीहरूले debtsण तिर्न यो मुकुटमा बेचे र राजाहरूले यसलाई शिकार दिन वा भोजका लागि प्रयोग गर्न थाले। हेनरी द्वितीयले यो आफ्नो प्रेमीलाई दिए, कविहरूको डायना र उनी एक जसले पुल, बगैंचा जोडेको थियो।
राजा रानीको मृत्यु हुँदा, क्याथरीन डे मेडिसीउसले उनलाई बाहिर फ्याँकिदियो र त्यहाँ एक पटक उसले लामो र रमणीय ग्यालरी बनायो जुन आज महल र बलरूमको विशेषता हो। यो हरियोले घेरिएको एक सुन्दर महल हो र मिनिभन वा कार पार्कहरू करिब एक सय वा एक सय पचास मिटर टाढाको रूपमा, तपाईं नजिक हिंड्नुहोस् र दृश्यहरू उत्कृष्ट छन्।
जब म गएको थिए, अक्टुबरमा, रिसेप्शनमा फायरप्लेस प्रज्ज्वलित थियो र कसैको हात न्यानो बनाउन आयो। यहाँ र त्यहाँ हलहरूमा व्यवस्थित विशाल फूलदानबाट आएको ताजा फूलहरूको गन्ध थियो र यो महल भन्दा घर जस्तो देखिन्थ्यो। भित्र पुनर्जागरण शैलीको फर्नीचर, धेरै चित्र र टेपेस्ट्रीहरू छन् र महलको निजी कोठामा रुबेन्स, नेट्टियर वा ले प्राइमेटिसले काम गर्दछ।
छ चैपल राम्री जसको रंगीन दाग गिलास विन्डोजहरू WWII बमले नष्ट गरेको थियो, यद्यपि आज प्रतिस्थापनहरू छन्। म भित्र पस्ने मौका थिएन किनकि यो मर्मतका लागि बन्द थियो तर त्यो क्षणिक थियो। महल भित्रको नि: शुल्क पैदल यात्राले तपाईंलाई पुर्‍याउँछ भान्छा, तल्लो तहमा, सुन्दर, यसका सबै तामाको कुकवेयरहरू भित्तामा र सल्फेरहरूमा झुण्डिएका छन्, र साना झ्यालहरू छन् जसले पुल र खोलामा हेरेर, केवल माछालाई पानीबाट सिधै भान्सामा ल्याउन।
La Meter० मिटर लामो ग्यालरी यो यसको अर्को चमत्कार हो, कालो र सेतो फ्लोरहरू जुन बलरूमको रूपमा प्रयोग गर्दछ। के तपाईं महिलाहरू र सज्जनहरू मैनबत्तीको मुनिको नाचमा कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? अर्को छेउमा ढोका सामान्यतया बन्द हुन्छ, यद्यपि तिनीहरूले उच्च पर्यटन मौसममा यसलाई खोल्दछन्। म त्यो भाग्यशाली थिएन।
अन्तिम बगैंचाहरु तिनीहरू छुट्टै हिंडिरहेका छन्। क्याथरिन डि मेडिसीको केन्द्रीय पोखरी छ र डियान डी पोइटियर्सको सुन्दर झरना छ। शुक्रबार, शनिबार र आइतबार जूनमा राती तिनीहरू उज्यालो हुन्छन्, जुलाई र अगस्तको हरेक रात साँझ 9: from० देखि।
त्यहाँ एक समय विश्राम गर्न को लागी ले ऑरेंजरी कफि शप, पुरानो अस्तबलमा, जहाँ खाजा सहित टूर भाँडामा लिनेहरू खानपिन बसे। के यो सुविधाजनक छ? होईन, त्यहाँ स्न्याकको लागि किओस्क छ र तपाईंसँग यताउता जान अझ धेरै समय छ। यस २०१ 2018 मा प्रवेश १ 14 यूरो वा १ audio अडियो गाईडको साथ लाग्छ।
अर्को किल्ला मैले त्यो भ्रमणमा भेटें चेभर्नी महल। यो वास्तवमा महल भन्दा बढी हवेली हो र म बुझ्दिन कि किन उनीहरूले यसलाई यात्रामा समावेश गरे जब त्यहाँ धेरै सुन्दर मध्यकालीन महलहरू छन्। तर हे, यो एक पुनर्जागरण शैली को महल हो छ शताब्दी देखि एकै परिवारको हात मा छ, Huraults।
स्रोतका अनुसार चेभर्नी १ 1604०1635 र १XNUMX बीचमा निर्माण गरिएको थियो, र यसको क्लासिक लुइस XIII शैली छ, धेरै धेरै symmetrical। आज यो आंशिक रूपमा खुला छ किनभने त्यहाँ एउटा अंश छ जुन परिवारले खेतमा जानका लागि प्रयोग गरिरहन्छ। भ्रमण एक साइनपोष्ट गरिएको मार्ग द्वारा हो जुन तपाईंलाई एक कोठाबाट अर्को सुसज्जित कोठामा लैजान्छ। पहिलो हतियार, आर्मर, तरवारहरू, र सुन्दर टेपेस्ट्रीहरूद्वारा सजिलो एक विशाल कोठा हो।
तपाईं काठको प्यानलि with सहित एउटा भोजन कोठामा जानुहुन्छ जसले डोन क्विक्सोटको कथा बताउँछ, एक सुन्दर फायरप्लेसको साथ, तपाईं एउटा सुत्ने कोठामा जानुहुन्छ, टेबल सेटसहितको सुन्दर चिया कोठाबाट र माथिल्लो तलामा महलको निजी चैपल हो। ।
त्यहाँ सागपातहरू छन् बगैंचा त्यो युद्धमा उनीहरूलाई थाहा थियो कि लुभ्रेको केही सम्पत्तीहरू कसरी राख्ने, र तपाईं हिड्न सक्नुहुनेछ जब सम्म तपाईंको यात्राको गाईडले तपाईंलाई अर्को महलमा बोलाउँदैन।
मेरो मामला मा यो थियो चेम्बर्ड महल। सबैमा सब भन्दा प्रसिद्ध? हो, किनकि यो कत्तिको प्रभावशाली छ। यो एक तेजस्वी राजा फ्रान्सिस प्रथम द्वारा निर्माण गरिएको थियो, १ XNUMX औं शताब्दीको सुरुमा एक उत्तम शिकार मैदानको रूपमा। यसमा rooms०० कोठा, 400 365 घर र st 84 सीढी छन्। उहाँ यहाँ केवल दुई महिना उनको शासनकालमा बस्नुभयो र आज यो अफसोस छ कि ऊसँग एउटा सानो टुक्रा छैन, वा लगभग भित्र छ।
क्याम्पर्ड खाली शेल हो तर तपाई सबैका लागि पत्ता लगाउन, माथि र तल जान, खाली कोठामा जान, उपेक्षित काठको ढोका ढकढक्याउने, छतमा चढाई र ल्यान्डस्केप चिन्तन गर्न सबैका लागि खुला छ। वास्तवमा, यदि तपाईं आफ्नै जानुहुन्छ भने, तपाईं हिंड्न वा यसको विशाल बगैंचाबाट बाइक लिन सक्नुहुन्छ। मैले भने कि त्यहाँ कुनै फर्नीचर वा त्यस्तै धेरै चीजहरू थिए, फ्रान्सिस I र लुइस चौधौंको शयनकक्ष बाहेक जो शाही खेलौनाहरूमा समर्पित छ। पछि, त्यहाँ अरू धेरै छैन।
च्याम्बर्डको मोती उसको हो सर्पिल सिँढी लिओनार्डो दा भिन्सी द्वारा डिजाइन गरिएको हो भनियो। यदि तपाईं कसैसँग जानुहुन्छ, एउटा एउटा सीढीमा जान्छ र अर्को अर्को चढ्छ र तिनीहरूले कहिले पनि स्पर्श गर्दैनन्। जुलाई र अगस्तको रात १०:०० देखि मध्य रातको बीचमा महलको अग्निपश्चात उज्यालो छ प्रकाश र ध्वनि कार्यक्रम।
थप रूपमा, एक अमेरिकी समाजसेवी, श्वार्जम्यानले हालै उत्तर बगैंचामा बगैंचा पुनर्स्थापित गर्न रकम दान गरे र आज उनीहरू १ sh औं शताब्दीमा झैं चम्किरहेका छन्। र तपाईले बाइक चढ्न भाडामा लिन सक्नुहुन्छ! यस २०१ 2018 मा भर्ना हुन १ 13 यूरो लाग्छ।
अन्य Loire को महल? गाई, सुरुचिपूर्ण एम्बोइज कैसल, ब्लोइस, लेन्जेइस वा ठोस Chaumont-sur-Loire.
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » फ्रान्स » Loire को Chtetex भ्रमण गर्नुहोस्